BWC081 - Ultra Mini WIFI ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်လာသည့်ကင်မရာ (140 ဒီဂရီ + Night Vision) | OMG Solutions
၁။ Full Definition 1P
2. built-in, G-Sensor
3 ။ loop ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်
5. အာရုံခံကိရိယာ: OV2719 + 6G F2.0 မှန်ဘီလူး
6. Built-in WIFI ဆက်သွယ်မှု
၉။ လျှောက်ခြင်းမျိုးစုံ - ဆိုလိုသည်မှာလမ်းပေါ်ရှိ Can recorder၊ Police Portable Camera, DIY
ဖြေရှင်းချက်: Novatek 96658
sensor: OV2719 + 6G F2.0 မှန်ဘီလူး
display: 1.54 လက်မ IPS
ကြည့်ရန် Angle: 140 °ကြီးမားသောထောင့်ကျယ် HD မျက်ကပ်မှန်
ဗီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု: 1920 * 1080P (30fps)
ဗွီဒီယို mode: Loop Recorder / Motion Detection
ဗီဒီယိုကို format နဲ့: H.264
Image ကို resolution ကို: 12M
ချောမွေ့သောဗီဒီယို: အထောက်အပံ့ - အလိုအလျောက်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
Built-in ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: lithium-ion Polymer ဘက်ထရီ
BWC081 - Ultra Mini WIFI ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်လာသည့်ကင်မရာ (၁၄၀ ဒီဂရီ + ညဘက်မြင်ကွင်း) နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: ဧပြီလ 24th, 2020 by admin ရဲ့
1278 စုစုပေါင်း Views စာ 11 Views စာယနေ့တွင်
BWC089 - ၁၆ နာရီကြာပေါ့ပါးသောရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်သည်
Mini သူလျှိုကင်မရာ - Hidden Pocket Pen Camera 170 …